अध्यागमनले मलेसियामा किन दैनिक छापा हानिरहेको छ ? - ramechhapkhabar.com
अध्यागमनले मलेसियामा किन दैनिक छापा हानिरहेको छ ?
काठमाडौं,३ मंसिर ।
हिजो सेलाङ्गोरको शाहआलमस्थित व्यापारिक क्षेत्रमा छापा मा’रेर २६ बंगलादेशी र एक नेपाली पक्राउ परेका छन् ।अपराह्न ४ बजेतिरको छापामा ५८ विदेशीको चेकजाँच गरी विभिन्न कसुरमा २७ जना प’क्राउ परेका थिए ।
” छापा मार्दा, अबै”धानिक विदेशीहरूलाई अध्यागमन अधिकारीहरूको उपस्थिति को बारेमा थाहानै नदिकन गो”प्य तरिका ले छापा मरेका हुन् जसले उनीहरुलाई भा”ग्ने मौका पनि पाएन। । अध्यागमन महानिर्देशक दातुक खैरुल जाइमी दाउदले २२ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका २६ जना बंगलादेशी र एक नेपाली नागरिक रहेको बताए ।
“पहिचान गरिएका अपराधहरूमध्ये पहिचान कागजातहरू नभएको, ओभरस्टे, पास सर्तहरू उल्ल”ङ्घन गर्ने र अध्यागमन ऐन उ”ल्लङ्घन गर्ने अन्य अ”पराधहरू थिए,” उनले आज एक विज्ञप्तिमा भने।
उनले भने, ‘अध्यागमन विभागले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न स्थानीय कर्मचारीलाई गवाही दिन दुई वटा नोटिस पनि जारी गरेको छ ।
“यस व्यापार क्षेत्रको वरिपरि, प्रवर्तन एजेन्सीहरूको चाल सुन्नको लागि धेरै ‘टोन्टो’ पनि राखिएको थियो, तर टोन्टोको प्रयास अपरेशन अफिसरहरूको चपलताले सफलतापूर्वक तोडियो। पत्ता लागेका कसुरहरूमध्ये पहिचान कागजात नभएको, ओभरटाइम बस्ने, पासको सर्त उ”ल्लङ्घन गर्ने र अध्यागमन ऐन उ”ल्लङ्घन गर्ने अन्य अ”पराधहरू पर्छन्।
“सबै थुनुवाहरूलाई सेमेनिह इमिग्रेसन डिटेन्सन डिपो, सेलान्गोरमा मा”नव बे”चबिखन र आप्रवासी वि”रोधी ऐन (एटीआईपीएसओएम), अध्यागमन ऐन १९५९/६३, राहदानी ऐन १९६६ र अध्यागमन नियम १९६३ अन्तर्गत अनुसन्धानका लागि राखिनेछ,” उनले भने।
आज एक प्रेस विज्ञप्ति..
उनले छा”पा मारेको स्थानमा अनुसन्धान गर्दा तीन तले परिसरमा सिलाई पसल सञ्चालन गरिएको र परिसरमा व्यापारिक गतिविधि नभएको र भेटघाट कम देखिने गरेको बताए ।
खैरुलले अनुगमनको नतिजाले सबै विदेशीले परिसरभित्र पस्ने र कामको समय नपुग्दासम्म सिलाईको कामलाई निरन्तरता दिने देखिएको बताए ।
“उनीहरूले काम पूरा गरेपछि मात्र यो आधार छोड्नेछन्। जब छापा मा°रिएको थियो, विदेशीलाई छापा मा-र्ने अधिकारीहरूको उपस्थितिको बारेमा थाहा थिएन र भाग्ने समय थिएन।
प्राप्त प्रारम्भिक जानकारीमा यी परिसरमध्ये अधिकांश स्थानीयको स्वामित्वमा रहेको र ‘अलि बाबा’मा विदेशीको स्वामित्वमा रहेको व्यवसाय रहेको बताइएको छ,’ उनले भने ।
टेलरलाई रोजगारी दिने परिसरले टेक्सटाइल सञ्चालकको अर्डर लिएर व्यवसाय गरिरहेको उनले बताए, वास्तवमा भने नियमित अर्डर पनि लिने तर नियमित ग्राहक मात्रै हुन् ।